हामी कमजोर कहाँ हो र ? |
हामी कमजोर कहाँ हो र ?
प्रकाशित मिति :2017-02-15 16:11:46
सिरहा । नेपाल टेलिकम लहानको शाखामा चौथो तहमा कार्यरत कर्मचारी सोनम चौधरी र संगीता यादव बिजुलीको पोलमा चढेर टेलिफोन लाईन मर्मत गर्छन् । उनीहरुले पुरुष सँगसँगै जोखिमपूर्ण काम गरेको हेर्न मानिसहरुको लर्को नै लाग्ने गर्छ । स्थानीयहरु महिला भएर यस्ता हिम्मतवाली हुनुपर्छ भन्दै उनीहरुको प्रशंसा गर्न थाल्छन् ।
महिलाले अवसर पाउने हो भने जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो । महिला कमजोर हुन्छन् वा पुरुषले गर्न सक्ने काम महिलाले गर्न सक्दैनन्, त्यसैले महिला पुरुष समान हुँदैनन् भन्ने गलत सोच नै महिलालाई अगाडि बढ्न नदिने तगारो हो ।
चौधरी र यादव लामो समयदेखि नेपाल टेलिकममा कार्यरत भएपनि केहि समयअघि मात्र प्राविधिक बनेका हुन् । सजिलोको लागि भन्दै सुरुमा उनीहरुलाई काउन्टरमा बिलिङ गर्ने जिम्मेवारी दिईएको थियो । महिला कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारी दिँदा उनीहरुको सीप र क्षमता विकासमा असर पुग्ने भन्दै उनीहरुलाई प्राविधिक कामको समेत जिम्मेवारी दिएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताउनुभयो ।
महिला प्राविधिकको काम पहिलो पटक देखेको भन्दै स्थानीय हरि नारायण यादवले महिला कमजोर भएर होईन अवसर नपाएर पछि परेका हुन् भन्ने प्रमाण ती महिलाको कामले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।
मधेशी मूलका महिलाहरु सजिलो कामका लागि त घरबाट बाहिर जान अनुमति पाउँदैनन् । ‘पुरुषले पनि हत्तपत्त गर्न नसक्ने काम उनीहरुले गरेका छन्, यो देखेर गर्व लागेको छ,’ स्थानीय आशा शाहले भन्नुभयो ।